ပညာရေး နှင့် အလုပ်အကိုင် ဆွေးနွေးပွဲ – NMDC
ပညာရေး နှင့် အလုပ်အကိုင် ဆွေးနွေးပွဲ
By NMDC Uncategorized Comments Off on ပညာရေး နှင့် အလုပ်အကိုင် ဆွေးနွေးပွဲ
ယနေ့ခေတ်လူငယ်များအတွက် မြန်မာ နှင့် စင်္ကာပူတို့၏
? HNC/HND(UK) နှင့် မြန်မာနိုင်ငံပညာသင်နှစ် (10) နှစ်၊ (၉)တန်း ၊ (၁၀) တန်း သင်ယူပြီး သူများ အတွက် အချိန်တိုအတွင်း UK, Australia နိုင်ငံ၏ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း တက္ကသိုလ် တို့မှ ဘွဲ့ဒီဂရီ ကို ရယူ နိုင်မည့် (MSI) ၏ စကာၤပူ နိုင်ငံပညာရေးနှင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ၊ ဝင်ငွေ လစာနှုန်းထားများ ဆွေးနွေးပွဲ ကို ရန်ကုန် နှင့် မန ္တလေး တွင် ယခုလ August 18 – 19 တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
? စကာၤပူနိုင်ငံ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့ရဲ့ ယခုနှစ်ကာလ အပိုင်းအခြားအတွင်း အလုပ်အကိုင်ရရှိရန် လွယ်ကူတဲ့ ဘာသာရပ် အကြောင်းများ နှင့် စကာၤပူနိုင်ငံ အတွင်း နောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်နေသည့် ပညာရေးနှင့်အလုပ်အကိုင် သတင်းအချက် အလက်များကို Myanmar Search International (MSI) နိုင်ငံခြားပညာရေး ဝန်ဆောင်မှု၏ ကြီးမှူးစီစဉ်မှုဖြင့်
(၁၈.၈.၂၀၁၈) စနေနေ့ ၊
နေ့လည် (၁) နာရီ မှ (၃) နာရီ ထိ
Pan Pacific Yangon Hotel (Emerald Room)
⏩ မန ္တလေးမြို့
(၁၉.၈.၂၀၁၈) တနင်္ဂနွေ နေ့ ၊
Royal Mingalar Hotel (Maharaungmyay Room)
? About Kaplan (KHEA)
◎ စင်ကာပူနိုင်ငံ၏ ပုဂ္ဂလိကပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများထဲတွင် Top (3) Best Private Education in Singapore ဆုကို (၆) နှစ်
ဆက်တိုက် ရရှိ ထားကာ Singapore အစိုးရက ပေးအပ်သည့် Edutrust ဆုကိုပါရရှိထားတဲ့ (KHEA) သည် မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ မဝေးဘဲ Asia ထဲမှာ စနစ်အကျ ဆုံးဖြစ်တဲ့ စကာၤပူရှိ နိုင်ငံပေါင်း (30) ကျော်မှ နိုင်ငံတကာကျောင်းသား/ကျောင်းသူပေါင်း (31,000) ကျော်လာရောက် ပညာသင်ယူ လျက်ရှိပါသည်။
◎ စကာၤပူနိုင်ငံရှိ Kaplan Higher Education Academy (KHEA) တက္ကသိုလ် မှာ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းပေါများသည့် ဘာသာရပ်တွေကို UK နဲ့ Australia နိင်ငံတို့မှ ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်တွေဖြစ်တဲ့ Murdoch University, Northumbria University , Royal Holloway, University of London, University of Portsmouth, University College Dublin, University of Essex တို့က ပေးအပ်တဲ့ဘွဲ့ဒီဂရီတွေရယူရန်အတွက် စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင်
2 နှစ်(သို့မဟုတ်)3နှစ် စာသင်နှစ်အားလုံးကို ပြီးမြောက်သည်အထိ သင်ယူ၍ သော်လည်းကောင်း စင်္ကာပူနိုင်ငံမှတဆင့် (KHEA) နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော UK / Australia နိုင်ငံတို့ကို ကူးပြောင်း ပညာသင်ယူ နိုင်ကြောင်း၊
ဒါ့အပြင် ဘာတွေ ဆွေးနွေးမျှဝေသွားမှာလဲဆိုရင်
? International Business,
? Human Resource Management,
? Accounting & Banking,
? Cyber Forensics & Information Security,
? Hospitality & Tourism Management,
? Project Management,
? Marketing Management ဘာသာရပ်တစ်ခုချင်းတိုင်း၏ အကြောင်းအရာများ ၊
◉ Australia နိုင်ငံ ၏ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း Ranking Top (1 to 100) အဆင့်ရှိတဲ့ Murdoch University မှ Bachelor of Business, Bachelor of Arts, Bachelor of Science ရဲ့ဘွဲ့တွေကို Double Major ဘာသာရပ် အတွဲများဖြင့် Kaplan Higher Education Academy တက္ကသိုလ်မှာသင်ယူနိုင်ကြောင်း ၊
◉ Double Major ဖြင့်ဘွဲ့ရရှိသူများအတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပိုမို ကျယ်ပြန့်လာသည့် အကြောင်းအရာများ ကိုပါ ဆွေးနွေးမျှဝေသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
? MSI မှတာဝန်ရှိသူ Managing Director ဒေါ်စုစုလှိုင် မှ ၎င်းပွဲနှင့်ပတ်သက်၍ ဖြေကြားရာတွင် “ယခုလက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Market Development Manager (Saw Melvyn Kolay) က Kaplan ကျောင်းသား ဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက် ပညာသင်ကြားနေစဉ် ကာလအတွင်း အတွေ့အကြုံ ရ ရှိခဲ့တဲ့ Studies, Living နဲ့ Extra-curricular activities စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို စကာၤပူနိုင်ငံအပြင် နိုင်ငံတကာမှာသွားရောက် ပညာသင်ကြားဖို့ အစီအစဉ်ရှိတဲ့ကျောင်းသား/သူတွေကိုပြန်လည်မျှဝေသွားမယ်။
◉ အဓိက နိုင်ငံခြားဘွဲ့ရပြီးသူနှင့်မြန်မာနိုင်ငံမှ ဘွဲ့ရပြီးသူ လူငယ်တွေအတွက် စကာၤပူနိုင်ငံနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းမှာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်နေတဲ့ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအမျုိးအစားနှင့် ရရှိမယ့် လစာနှုန်းထား တွေကို လည်းပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
◉ Banking and Finance ဌာနတွေအတွက်မရှိ မဖြစ် လိုအပ်နေတဲ့လုပ်သား အင်အားထု Fintech (Financial Technology), IT (Data, Security & Mobile) နှင့် Management & Marketing ဘွဲ့ဒီဂရီ ပြီးဆုံးအောင်မြင်ပြီးတဲ့ လူငယ်တွေ အတွက်ကို အဓိကထားပြီး မျှဝေပြောကြား ပေးဖို့ လည်း အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။
◉ Kaplan စကာၤပူတက္ကသိုလ်က Banking & Finance ပိုင်းမှာ အားသာချက် အများကြီးရှိတဲ့ အတွက် မြန်မာ နိုင်ငံ မှာ Banking and Finance ဘာသာရပ်ကိုစိတ်ဝင်စား သူတိုင်း မည်သူမဆိုအခမဲ့ Register ပြုလုပ်နိူင်ပါသည်။
Online Register Available Here :
◈ မြန်မာအစိုးရ ကိုးတန်း၊ ဆယ်တန်း အောင်မြင်ပြီးသူများ ၊
◈ International School မှ Grade-10 တက်ရောက်နေသူများ၊
◈ HND , ACCA , ABE ဒီပလိုမာတန်း ပြီးထားသူများ ၊
◈ တက္ကသိုလ် တက်ရောက်နေသူများ ၊
◈ ဘွဲ့ရပြီး သူများ ၊
◈ နိုင်ငံခြားပညာရေး နှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကို စိတ်ဝင်စားသူများ အားလုံးမည်သူမဆို အခမဲ့ လာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။
? ဆွေးနွေးပွဲ တက်ရောက်ရန် စာရင်းပေးသွင်းလိုသူများ အနေဖြင့်
? Yangon Phone – 095103915, 09420037616, 01381408
? Mandalay Phone – 09402517549, 01373461, 09767847673
သို့ ဆက်သွယ် နိူင်ပါသည်။
? MSI ရုံးခန်းလိပ်စာ
အမှတ် (234) ၊ ဒုတိယထပ် (ညာ) ရွှေဘုံ သာ အလယ်လမ်း (အလယ်ဘလောက်) ၊ ပန်ပဲတန်းမြို့နယ် သို့ လာရောက် စာရင်းပေးသွင်းနိုင်သည်။
သတင်းအတတ်ပညာ စတုတ္ထနှစ် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏ သတင်းရိုက်ကူးရေး assignment
အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလိပ် မြန်မာနိုင်ငံထူးချွန်ကြက်ခြေနီ(၂၀၁၉) ရွေးချယ်ခြင်းခံရသော ထူးချွန်ကြက်ခြေနီ အတွေ့အကြုံရှင်းလင်းပွဲအခမ်းအနား။
အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလိပ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံထူးချွန်ကြက်ခြေနီ(၂၀၁၉) ရွေးချယ်ခြင်းခံရသော မစိမ့်ဝတ်ရည်နှင်း ဒုတိယနှစ် BM ကျောင်းသူက ထူးချွန်ကြက်ခြေနီ တွေ့ဆုံပွဲကို ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အတွေ့အကြုံရှင်းလင်းပွဲကို ၁၄-၆-၂၀၁၉ ရက်နေ့ [...]
ကျောင်းကြီးပြီးတော့မယ်ဆိုေတာ့ နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ ကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်လုပ်ဖို့စဉ်းစားနေကြပြီဟုတ်? NMDC မှာ HEINEKEN Myanmar က ကျင်းပတဲ့ Campus Talk ကို လာခဲ့ဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ နေရာ- NMDC NCRC Hall နေ့ရက်- သြဂုတ်လ (၁) [...]
Clean NMDC Campaign
3-2-2020နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Clean NMDC Campaign ရဲ့ ပုံရိပ်တချို့ကို ဖော်ပြအပ်ပါသည်။ ဒီနေ့ Campaign မှာဖြင့် ကျောင်းသား၊သူဦးရေပေါင်း (၃၀၀) နီးပါး ပါဝင်ကြပြီးတော့ environmental awareness အတွက် ကျောင်းပြင်ပဆိုင် (၃၅) [...]
NMDC တွင်နှောက်ဆုံးနှစ်တက်နေတဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူများရဲ့ရင်ခုန်သံလေးများ
NMDC မှာ BBM (Bachelor of Business Management), EPP (English for Professional Purposes), BTHM (Bachelor of Tourism and Hospitality Managemet) [...]
“2020 International Essay Contest for Young People”
“2020 International Essay Contest for Young People” သို့ ဖိတ်ကြားလာခြင်းကိစ္စအား အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလိပ်မှ သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသူ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများသည် (www.goipeace.or.jp) သို့ တိုက်ရိုက်လျှောက်ထားနိုင်ပြီး အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလိပ် သင်တန်းရေးရာဌာန e-mail [...]
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် ပထမနှစ်သင်တန်း အဆောင်လျှောက်ထားမည့်ကျောင်းသူများအတွက်
အောင်မြင်စွာနှင့် ပြီးဆုံးသွားခဲ့သည့် NMDC VSF2.0 BBM Week
NMDC VSF2.0 BBM week ကတော့အောင်မြင်စွာနဲ့ ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ….. Stay-home ကာလအတွင်း ကျောင်းသားကျောင်းသူများ အကျိုးရှိစေဖို့ မအားလပ်တဲ့ကြားမှ အချိန်ပေးပြီးပါဝင်ကူညီပေးခဲ့ကြတဲ့ Panelists များ၊ Workshop Facilitators များကို BMSA Organizing Committee [...]
NMDC မှ ကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက် YDSC (Yangon Data Science Community) နှင့် NMDC SU တို့ ပူးပေါင်းပြီး DATA SCIENCE ကို သင်ယူနိုင်မည့် အခွင့်အရေး။
NMDC မှ ကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက် YDSC (Yangon Data Science Community) နှင့် NMDC SU တို့ ပူးပေါင်းပြီး DATA SCIENCE ကို သင်ယူနိုင်မည့် အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်သည့် – What’s [...]